Ungazisebenzisa njani iiHashtag zokunyusa ukuFikelela kwePhulo lakho | Martech Zone
I-39% yamashishini musa ukulandela umkhankaso wabo wentlalo kwaye kukhokelela kumathuba aphosiweyo. Ndiza kukubonisa indlela yokulandelela ngokufanelekileyo ii-hashtag ngexesha lemisitho, kunye neendlela onokuzisebenzisa ukwakha umkhankaso ofikelela ngokubanzi. Ndiza kugxila kwizinto ezimbini:
Ibalulekile iimetwork Kuya kufuneka ulungele ukulinganisa xa uqhuba umkhankaso we-hashtag
Elula tricks ungasebenzisa ukwenza ukufikelela okubanzi
Iimpawu zeMikhankaso yoLuntu ebalulekileyo
Uninzi lwemikhankaso yezentlalo yenzelwe ukwakha ulwazi endaweni yokuqhuba uguquko kwangoko. Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka ucace malunga nenjongo yephulo lakho kunye neemetrikhi ekufuneka uzilandele ukuze ugwebe impumelelo.
usebenzisa Keyhole's abaqhubi beakhawunti, uya kuba nakho landela isiseko sezi metriki ngaphambi nasemva kokuba uqhuba iphulo lakho le-hashtag.
Ukukhula komlandeli kwaye inqanaba lokuzibandakanya kukunceda ulinganise iimpembelelo ezingapheliyo zomkhankaso wakho we-hashtag kuwo omabini amalungu asele ekho kunye nasanda kufunyanwa
Kutheni le nto ukukhula koMlandeli kunguMgaqo ophambili weNtlalontle yoLuntu?
Ukukhula komlandeli ngummakishi wokufikelela kwephulo okhethe ukuliqhuba. Ibonisa ukuba iphulo lakho likwazile ukufikelela kubasebenzisi ababengekadibaniswa negama lakho.
Ukulinganisa ngokufanelekileyo ifuthe lephulo lakho, ngena kwiqondo eliphakathi lokukhula kwiiveki ezingaphambi komsitho. Emva koko, bhala ukukhula okuphakathi kwemihla ngemihla emva komsitho.
[uhlobo lwebhokisi = "impumelelo" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "80%"] Umnyhadala ophakanyiswe ngempumelelo kufuneka ubonakalise izinga lokukhula komlandeli onyukayo ngala maxesha. [/ ibhokisi]
Okwangoku, inqanaba lokuzibandakanya lilinganisa ukusebenza komyalezo wakho. Ukuba umyalezo wena kunye nabalandeli bakho nityhala uyanyanzelisa, kuya kufuneka ubone ukonyuka kokuphakathi kwenqanaba lokuzibandakanya kwiakhawunti yakho.
Le metric ikwaluphawu lokuba uzakhele okujolise kuko ngokulandela umkhankaso we-hashtag.
Ulandelela njani ukukhula komlandeli?
Ungalandelela ngesandla iimetrikhi ngokugcina ispredishithi ohlaziya ngaso iveki nganye. Kuya kufuneka ungene kwiinguqu zomlandeli, kunye nenqanaba lokuzibandakanya ngeveki ngaphambi komsitho. Ukusukela ungagcina kuphela iakhawunti enye ye-Twitter nganye eyakhelweyo kubahlalutyi ideshbhodi, le ndlela ingatya ixesha.
Iya kukushiya ebumnyameni ukuba unee-brand ambassadors ezikuncedayo ukukhuthaza eli phulo-kuya kufuneka uskrole kuyo yonke i-Twitter feed yazo ukuqokelela iimetriki zokuzibandakanya xa betyhala umyalezo wakho.
[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Ungayisebenzisa inkqubo ngokusebenzisa i uhlalutyo kwimidiya yoluntu isixhobo esinjenge Isitshixo. [/ ibhokisi]
Nge-Keyhole, unokulandelela iiakhawunti ezininzi kwindawo enye. Iqonga lilanda ukukhula komlandeli ngaphambi nasemva kwephulo lakho, ukubeka esweni ukusebenza koonozakuzaku bakho.
Kubalulekile ukulandela umkhondo weakhawunti yakho ngaphambi kwephulo kunye nokuthumela umkhankaso wokufunda ukuba yintoni esebenzayo, yintoni engasebenziyo kunye nokufumana umyalezo ohambelana nabaphulaphuli bakho abafunyenweyo.
Zeziphi iimetriki ekufuneka uzilandele ngokuthe ngqo ukulinganisa ifuthe lamaphulo akho e-hashtag?
Ukulinganisa ukusebenza kwephulo le-hashtag akunakwenzeka ngaphandle kwezixhobo zemidiya yoluntu ezinje ngeKeyhole. Umthonyama we-Twitter kubahlalutyi Inkqubo ikuvumela ukuba ulandele umxholo ozivelise ngokwakho kodwa ayikuniki ukufikelela kwindlela ii-hashtag okanye igama eliphambili olikhuthaza lisasazeka eqongeni.
Iimpawu zokubeka iliso ngexesha lephulo lakho:
Fi kelela -Inani labantu ababodwa abanokubona iiposti zakho.
Iimpawu Inani elipheleleyo leembono ezinokubakho (kubandakanya abasebenzisi abafanayo ababona isithuba esinye amaxesha amaninzi)
Ukuboniswa -Ilinganisa amanyathelo apheleleyo okuveliswa ngumsebenzisi, kubandakanya nokubonakala kwabo kuveliswe ziiRetweeters zabo
Inqanaba lokuzibandakanya -Imilinganiselo yokuzibandakanya eyenziweyo kwizithuba ezenziwe ngabantu ababandakanyeka kwi-hashtag yakho okanye kwigama eliphambili. Le yimetri ekuvumela ukuba ukwandise iphulo lakho kwaye wandise ukubonakaliswa kwegama lakho, ngokufikelela kubaphembeleli abanenqanaba eliphezulu lokuzibandakanya, uya kuba nakho ukufikelela kubabukeli ngokubanzi kwimakethi yakho ekujolise kuyo.
Nanku umboniso we-Keyhole's Reach and Impressions Analytics:
[uhlobo lwebhokisi = "isilumkiso" lungelelanisa = "iklasi =" ulungelelwaniso "ububanzi =" 80% "] Kuba iTwitter ayiboneleli ngqo ngeemitha zeakhawunti kwizixhobo zeQela lesithathu, ukufikelela kunye nokuPhumela okubaliweyo kusekwe kwinani lamaxesha apho izithuba zibonisiwe. Eli nani libizwa ngokuba yinto enokubakho. Eyona nto ibonakalayo inokuba isuka kwi-3% ukuya kwi-13% yezinto ezinokubakho ngokuxhomekeke kwizinto ezinje ngexesha lokuposa, igama eliphambili kunye nomsebenzi wabalandeli. [/ Ibhokisi]
Amaqhinga alula okuvelisa ukufikelela kumkhankaso ngokubanzi
Ngaphambi kokuqala iphulo lakho, sebenzisa i-hashtag kunye negama elingundoqo lokulandela umkhondo ukulandela izihloko zeshishini ezibanzi ezinxulumene nomsitho wakho. Emva kweentsuku ezimbalwa kuya kufuneka uqale ubone iiakhawunti ezifumana olona shishino lubalulekileyo.
Fikelela kwaba bantu ubameme ukuba bathathe inxaxheba kwiphulo lakho xa liqala.
Sebenzisa iakhawunti isixhobo Ukulandelela iakhawunti yakho kunye neyokhuphiswano. Oku kuyakuvumela ukuba ufumane owona mxholo wakho uwenza kunye nexesha lokuthumela. Lungiselela umyalezo wakho malunga nomxholo kunye nokuphrinta okwenza ngcono kubaphulaphuli bakho. Faka ii-hashtag ezenze kakuhle ngokwembali kwiphulo lakho.
[ibhokisi yohlobo = "ulwazi" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "80%"]Icebiso Pro: xa kugaywa abachaphazeli, khangela abantu abafumana uthethathethwano olulishumi okanye nangaphezulu kwisithuba ngasinye. [/ box]
Ukubhengezwa: Sinento yokwenza nokudluliselwa Isitshixo.
tags: NxaxhebautyhilekoUmsebenzi womlandeliitegi yexabisoUhlalutyo lwe-hashtagiphulo le-hashtagUkuvezwa kwe-hashtagIimpawu ze-hashtagukufikelela kwi-hashtagIimpawuinqanaba lokuzibandakanyaisitshixofi keleleiphulo loluntuukuzibandakanya ekuhlaleniintlalontle elandelayonxaxheba kwezentlaloimidiya yoluntu elandelayoimithombo yeendaba zentlalo ifikelelaukufikelela ekuhlaleniTwitter